तपाईं देब्रे कोल्टो परेर सुत्नुहुन्छ कि दाहिने ? जानौं कसरी सुत्ने « हाम्रो ईकोनोमी
तपाईं देब्रे कोल्टो परेर सुत्नुहुन्छ कि दाहिने ? जानौं कसरी सुत्ने
तपाईं सुत्दा कुन कोल्टो सुत्ने गर्नुहुन्छ ? जुन मन लाग्छ त्यहीचाहिँ नभन्नुहोला । यद्यपि सुत्ने तरिका व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ । बिर्सन नहुने कुरो के हो भने, सुताइको मुद्राले स्वास्थ्यमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसैले यसमा सचेतता अपेक्षित मानिन्छ ।
देब्रेतर्फको सुताइका कारण हामीले खाएको भोजन सानो आन्द्राबाट ठुलो आन्द्रासम्म आरामले जान सक्छ । यसैले बिहान पेट सजिलै सफा हुन्छ । गर्भवतीहरूले समेत देब्रे कोल्टो सुत्नु निकै उत्तम मानिन्छ ।